Samsung na Huawei liri hatchet | Gam akporosis
Samsung na Huawei liri nkata
Apple na Samsung echewo ihu ihu ruo ọtụtụ afọ n'ihi na nke mbụ boro ụlọ ọrụ Korea ebubo na ha na-edegharị ụzọ kpọghee iPhone na ọdụ ya, na mgbakwunye na imepụta nke iPhone mbụ. Esemokwu ndị ahụ ha gwụchara afọ ole na ole gara aga mgbe ha abụọ kwetara, nkwekọrịta nke ọ nweghị ihe ọ bụla gafere.
Mana ọ bụghị naanị esemokwu Samsung nwere na afọ ndị na-adịbeghị anya, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ China ọ nwekwara mgbakwunye yana minuses na afọ atọ gara aga. Ọ dabara na ụlọ ọrụ abụọ ahụ, dị ka ndị mgbasa ozi Nikkei si kwuo, Ha ruru nkwekọrịta na patent esemokwu ha na-eche ihu.
Dabere na onye okwu a, Courtlọikpe Kasị Elu nke Guangdong, nke dị na ndịda China etinyela nkwekọrịta ahụ. Okwu ndị a, dịka ọ dị na mbụ n'ụdị nkwekọrịta a, emeghi ka ha mataEe, mana ihe kacha dịrị nchebe bụ na ụlọ ọrụ abụọ ahụ ekerịtala ojiji nke ụfọdụ ikikere, patent nke doro anya dị mkpa ma ọ bụrụ na ịmee ama ọ bụla.
O yikarịrị, ụlọ ọrụ abụọ ahụ bu n'obi ilekwasị anya n'inwekwu ekwentị ugbu a na ahịa ahụ yiri ka ọ kwụsịrị. Ruo ugbu a, ọ bụ ezie na Huawei jisiri ike nweta 17% nke ahịa, ụlọ ọrụ Korea ahụ enweela mbelata 10%. N'agbanyeghị ọdịda a, ọ ka bụ ụlọ ọrụ na-etinye ọtụtụ ekwentị na ahịa kwa ọnwa.
Companieslọ ọrụ abụọ ahụ malitere esemokwu ha n’afọ 2016, mgbe Huawei gbara akwụkwọ na patent infringement lawsuits megide Samsung ma na China na United States. Na Jenụwarị 2018, ụlọ ikpe ndị China kpebiri Huawei, na-enye Samsung iwu ịkwụsị ire ngwaọrụ ndị ikpe ahụ metụtara. Mgbe ahụ Samsung na-akwado Huawei na akwụkwọ ikike ọzọ. N'ime ụdị iwu a gafere na patent, ihe kachasị mma bụ iru nkwekọrịta nkwekọrịta, dịka ụlọ ọrụ abụọ ahụ mere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na Huawei liri nkata
Amazon na-ewepụta Ọkụ ọhụrụ 7 nwere ikike nchekwa abụọ maka € 69,99
Mee ka nchedo nchedo maka Galaxy Note 9 dị ugbu a